ईस्वी सम्वत चौथो शताब्दीको प्रारम्भमा चीनको अधिकार केन्द्रित सरकारमा उथल-पुथल भएर चीनको दक्षिण र उत्तरमा दुइवटा शासन-व्यवस्थाको स्थापना भयो । दक्षिणी क्षेत्रको तुङ चिन् अर्थात पूर्वी चिन् शासनले याङ सी नदी क्षेत्रमाथि नियन्त्रण गरेर चिआन् खाङ अर्थात अहिलेको नान् चिङ शहरलाई आफ्नो राजधानी बनाएको थियो । उत्तरी क्षेत्रको व्हाङ ह नदी क्षेत्रमाथि गणजाति शासन अर्थात पूर्व छिनले नियन्त्रण गरेको थियो । त्यसको राजधानी छाङ आन् हो अर्थात अहिलेको सि आन् शहर थियो।
पूर्व छिन राज्यका सम्राट फु चिआन् एकजना दक्ष व्यक्ति थिए । उनले हान् जातिका बुद्धिमान व्यक्तिलाई सल्लाहकार बनाउनुका साथै मुलुकमा सुशासन कायम गरी अवैध गतिविधि गर्ने कुलीन शक्तिमाथि प्रहार गरे। उनले केन्द्रीकृत आधारमा जल-संभार कार्य सञ्चालन गर्दै कृषिको विकास गर्ने नीति अपनाएका थिए। यसका अतिरिक्त, उनले सैनिक शक्तिको सबल रुपमा विकास गरी तुंग चिन् अर्थात पूर्वी चिनमाथि विजय हासिल गरी चीनको एकिकरण गर्ने योजना बनाएका थिए।
सन् 383मा फु चिआनले विभिन्न जातिका मानिसहरुलाई सेनामा भर्ना गराई 8 लाख 70 हजार मानिस सम्मिलित सेनाको निर्देशन गरी पूर्वी चिनमाथि हमला गर्न गएका थिए । पूर्वी चिनको सेनामा एक लाख जति सैनिकहरु मात्र भएको खबर पाएकाले फु चिआनले निकै अभिमानी भएर भने:"मेरो शक्तिशाली सेनाले घोडाका कोर्राहरु खोलामा फालेमा खोलाको प्रवाहलाई रोकिदिन सक्नेछन। यस्तो सेनाले चिन शासनलाई सखाप पार्न सक्दैन र ? "
पूर्वी चिनले पूर्व छिनका सेना दक्षिणतीर आइलागेको थाहा पाएर तुरुन्तै शे श र शे स्युआनका नियन्त्रणमा असी हजार सैनिक पठाएर शत्रुको सामना गर्न आदेश दिएका थिए । यसै बेला पूर्व छिनको अग्रिम सैनिक टुकडीले पूर्वी चिनको राजधानीदेखि नजिकै पर्ने लो चिआन् अर्थात अहिलेको आन् व्है प्रान्तको लो हमा पुगेर व्हे ह नदीको यातायातलाई अबरुद्ध पारिदिएका थिए। त्यस बेला संकटको अवस्था देखा परेको थियो। शे श र शे स्युआनले लो चिआनमा रहेका शत्रुलाई लुकिचोरी प्रहार गर्न पाँच हजार सैनिक पठाएका थिए। चिन शासनका सेना विजय हासिल गरेर झन आँटिला भएका थिए। त्यसैले चिन शासनका सेनाले स्थल र जल दुबै मार्गबाट फै शुए भन्ने खोलाको पूर्वी किनारामा गएर युद्ध गर्न थाले।
फु चिआनले अग्रगामी सेनाले हार खाएको खबर पाएपछि सेनालाई प्रेरणा दिन यु तुरुन्तै द्ध मोर्चामा आएका थिए। उनले शहरको बुर्जामा आरोहण गरेर फै शुए खोलाको पूर्वी किनारामा रहेका चिन शासनका सेनाको अवस्थाको अवलोकन गरे। उनले पूर्वी किनारामा रहेका चिन् शासनका सैनिक शिविरमा पाल टाँगेका र तीनमा ध्वजा-पताकाहरु पनि फहराइरहेका देखे। शिविरबाट क्षण-क्षणमा मादलको आवाज पनि आइरहेको थियो। यसले गर्दा फु चिआनको मनमा आश्चर्यको छाल उठ्यो। उनले तुरुन्तै उत्तरतिर फर्केर टाढाको पा कुङ शान् पहाडमा नजर पुर्‍याए। तर पनि फु चिआनको मनमा चिन शासनको सेनाको शिविरको दृश्य झलझली आइरह्यो। आँखा तिरमिर भएका उनले पा कुङ शान् पहाडमा भएका रुखहरुलाई पनि शत्रुका असंख्य ध्वजाहरुका रुपमा देखे। उनलाई ज्यादै डर लाग्यो र फेरि त्यता हेर्ने हिक्मत पनि गर्नसकेनन। फु चिआनले आफ्नो तल्लो तहका अधिकारीलाई भने:"चिन् शासनका सेना धेरै छन् र घोडाहरु पनि धेरै　छन, यो शक्तिशाली शत्रु हो, उनीहरुलाई किन तिमीहरुले दुर्बल ठानेका छौ?"
यसै बेला शे श र शे स्युआनले छलफल गरेर के निश्कर्षमा पुगे भने पूर्व छिन शासनका सेना बढी भए तापनि ती सिपाहीहरुमा विभिन्न जातिका मानिसहरु भएकाले उनिहरुमा मेल छैन। यसका अतिरिक्त, पूर्व छिनका सेना बढी भए तापनि उनिहरुले लामो पैदल यात्रा गर्नुपरेका कारण सैनिक र घोडा दुबै थाकेका छन। त्यसैले चिन् शासनका सेनाले तिव्र आक्रमणका आधारमा युद्ध समाप्त गर्ने रणनीति अपनाउनुपर्छ। त्यसैले शे श र शे स्युआनले फु चिआनलाई पत्र पठाएर छिन् शासनका सेनालाई फै शुए खोलाको किनाराबाट पछि हट्न र यस मौका पारी खोला तरिरहेका चिन् शासनका सेनामाथि अकस्मात प्रहार गर्न सेना पठाउने फु चिआनको विचार थियो। त्यसैले पूर्व छिन शासनका सेनालाई पछि हट्ने आदेश दिए ।
तर पूर्व छिन् शासनका सेनामा विभिन्न जातिका सिपाहीहरु भएका कारण लडाईं गर्ने उनीहरुको इच्छा थिएन र पछाडिका सेनाले पछि हट्ने आदेश पाएपछि अघिल्लो मोर्चामा सेनाले हार खाएको ठानेर हतारमा पछि हटे। पूर्व छिनका सेनामा तुरुन्तै गोलमालको स्थिति सिर्जना भयो। यो मौका छोपेर चिन् शासनका सेनाले फै शुई खोला पार गरी हमला शुरु गरे। पूर्व छिनका सेनामा केही सैनिकले "छिन सेनाले हार खाएको उद्घोष गरेका थिए। "अरु सैनिकहरुले यो कुरा सुनेपछि स्थिति झनै गोलमाल भयो। त्यसपछि पूर्व छिनका सैनिकहरु भाग्ने क्रममा किल्चिएर धेरै सैनिक त्यसै मरेका थिए। त्यस क्रममा फु चिआन्लाई पनि गोली लाग्यो र उनी घाइते भए। चिन् सैनिकहरुले लखेट्दै मारकाट गर्दै गए र फु चिआनले हत्तपत्त केही सैनिकसहित भागे। उनीहरुले भाग्दा-भाग्दै निकै थकाइ लागेपछि एक छिन आराम गर्नखोज्दा अकस्मात हुरी-बतास र बकुल्लाको आवाज सुने। यो आवाज सुनेर चिन् सैनिकहरु आएको भ्रममा परी फेरि भागे। पूर्व छिनका सेना हार खाएर फर्किसकेका थिए र त्यसको शक्ति दिनप्रति दिन कम्जोर हुँदैगएर दुई वर्षपछि पूर्व छिनको पतन भयो।
फै शुई लडाईंका क्रममा चिन् शासनका असी हजार सैनिकले पूर्व छिन् शासनका आठ लाख सत्तरी हजार सैनिकमाथि विजय हासिल गरेका थिए। चीनको इतिहासमा यो लडाईंलाई दुर्बल शक्तिले शक्तिशाली सेनामाथि विजय हासिल गरेको एक प्रसिद्ध लडाईं ठानिएको छ । यसका अतिरिक्त, फै शुई लडाईंको कथाबाट "कोर्रा फालेर खोलाको प्रवाहलाई छेक्ने, घाँस तथा रुखहरुलाई पनि शत्रु पक्षका सिपाही ठान्ने भ्रम,"हुरी बतास र बकुल्ला चराको आवाज"आदि उखानहरु पनि प्रचलनमा आएका छन।